KULULA UKUFAKA NGESIKHATHI ESINGU-3 HOLE 4 inch : Ompompi besibambo esisodwa sokugezela balingana nokufakwa okujwayelekile okungu-4-Intshi. Umpompi wampompi ojwayelekile uza ne-lift rod kanye nesivalo se-pop up. Impahla yompompi wokugezela owodwa: Ingxubevange yeZinc / Insimbi engagqwali; Indawo engaphezulu: I-nickel ebhulashiwe nokuphrinta kweminwe kwamahhala kungamelana nokugqwala.
UKULAWULWA OKULULA OKUSHISA AMANZI : Isibambo sikampompi kampompi usinki kulula kakhulu ukuya emuva naphambili phezulu naphansi. Kulula ukulawula umthamo wamanzi nokushisa kwamanzi. Ukushesha, umpompi wamahhala wokufaka wamahhala wamathuluzi, ukujula okuphezulu okungu-1.2 inch.
INHLANZI YOKUSETSHENZISWA NGOMHLANGANO WEDRINA IHLANGANISIWE: Umpompi wokugezela obhulashiwe we-nickel ufika nokuhlanganiswa kwensimbi, amanzi aphuma kusinki kampompi ngokucindezela phansi induku yokuphakamisa, ukugwema ukufingqa izandla zakho ezigeziwe. Imigqa Yokuhlinzeka Ithengiswa Ngokuhlukana
INANI ELIPHEZULU LEMALI: Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu 3 imbobo inomklamo we-retro wemfashini wakudala. Umpompi oyize ofakwe odongeni ulingana nendlu eqashisayo, i-condo entsha, ifulethi elilodwa, ikhaya lezimoto, i-trailer yokuhamba kanye nokusetshenziswa komndeni.
IKHWALI ELIPHEZULU NEWARANTI YEMINYAKA EMI-5: I-aerator ye-ABS yonga u-50% wamanzi kanye ne-anti-splatter, engase yehliselwe phansi ngokuqondile ngezandla zakho ukuze uyihlanze (akukho mathuluzi adingekayo). I-cartridge ye-ceramic yamahhala yokudonsa iyabekezelela. Sicela usithinte uma kukhona imibuzo.
I-SKU: 2320700 Categories: Amafulethi Wokugezela Elingashintshiwe Owodwa, Amanzi okugeza Tags: I-Nickel ehlutshiwe, Classic, Hlanganisa, i-lavator